UKolisi ujabulile ngokuyodlalela ama-Sharks | Scrolla Izindaba
UKolisi ujabulile ngokuyodlalela ama-Sharks
Ukaputeni wamabhokobhoko owanqoba indebe yomhlaba uSiya Kolisi uzwakalise injabulo yakhe ngokujoyina i-Cell C Sharks kulandela uhambo lwakhe lweminyaka eyi-11 ne-Western Province Rugby.
Ama-Sharks akuqinisekisile ukusayina kukaSiyamthanda ‘The Bear’ Kolisi esivumelwaneni seminyaka eminingi, kanti uKolisi akasayidlaleli i-Western Province Rugby.
UKolisi uthathe isinqumo sokungayivuseleli inkontileka yakhe ne-Western Province Rugby eyayizophela ngoMfumfu kowezi-2021, yize inyunyana yazama konke okusemandleni ukumgcina ekuleli qembu, kepha ukaputeni wayesevele esithathile isinqumo.
U-The bear uchaze lesi senzo sakhe njengesiqalo sesahluko esisha ebholeni lakhe lombhoxo, njengoba edlale wonke umdlalo wakhe wobuchwepheshe eKapa edlalela i-Western Province.
“Mina nabathandekayo bami asisakwazi ukulinda ukuze ngiqale. Ngijabule ukuba yingxenye yomndeni we-Cell C Sharks,” kusho uKolisi ku-akhawunti yakhe ye-twitter.
UKolisi uphinde wahlangana nozakwabo abaningana bamaBhokobhoko okubalwa kubo uCurwin Bosch, uSbu Nkosi noLukhanyo Am ku-KZN Union.